Iska Illow Bayern & PSG - Jurgen Klopp Oo Magacaabay LABADA Kooxood Ee Uu Ku Farxay In Liverpool Ka Badbaadday Wareegga 8da Champions League | Laacibnet.net
HomeWararka Champions LeagueIska Illow Bayern & PSG – Jurgen Klopp Oo Magacaabay LABADA Kooxood Ee Uu Ku Farxay In Liverpool Ka Badbaadday Wareegga 8da Champions League
Iska Illow Bayern & PSG – Jurgen Klopp Oo Magacaabay LABADA Kooxood Ee Uu Ku Farxay In Liverpool Ka Badbaadday Wareegga 8da Champions League
Jurgen Klopp ayaa qirtay in uu aad ugu farxay in kooxdiisa Liverpool ay ka badbaadday in ay ku beeganto wareegga siddeedda ee tartanka Champions League oo isku-aadkiisa maanta la sameeyey.
Liverpool oo xilli ciyaareedkii hore ku guuleysatay horyaalka Premier League ayaa quus ka istaagtay dhamaan tartamada maxalliga ah waqti horeba xilli ciyaareedkan, kaddib dhibaatooyin ay sabab u ahaayeen dhaawacyo oo ku habsaday khadkeeda difaaca iyo dhexda.
Fursadda kaliya ee ay xilli ciyaareedkeeda ku badbaadsan karto Liverpool ayaa ah in ay guulo ka keento tartanka Champions League oo ay wareeggiisa siddeedda isku beegmeen Real Madrid, waxaana Jurgen Klopp oo ka hadlay kulankan uu sheegay in uu yahay mid adag.
Madrid ayaa LLiverpool ku garaacday finalka Champions League ee sannadkii 2019, waxaana Reds ay haysataa fursad ay kaga aargoosan karto Zidane iyo xiddigihiisa.
Tababare Jurgen Klopp oo warbaahinta la hadlay ayaa la su’aalay kooxaha uu ku faraxsan yahay in ay Liverpool ka badbaaddo, waxaanu iska illoobay naadiyada awoodda badan ee Bayern Munich iyo PSG, waxaanu soo qaatay labada kooxood ee horyaalka Premier League ay ka wada ciyaaraan ee Manchester City iyo Chelsea oo uu tibaaxay in uu ku faraxsan yahay in aanay isku beegmin.
Jurgen Klopp ayaa yidhi: “Isku-aadka wuu adag yahay, laakiin aad iyo aad ayuu u xiiso badan yahay. Aniguna waan fiicanahay, sababtoo ah haddii aad eegto kooxaha kale oo dhan, waxaad odhanaysaa, “Yaa Ilaahii” sababtu waxay tahay in ay yihiin kooxo aad u xooggan oo tayo badan, wayna iska caddahay. Wanaag ayaan rajaynayaa kulamadan.”
Waxa uu si gaar ah usoo qaaday Real Madrid, isagoo yidhi: “Laba sannadood ka hor ayay ahayd markii aanu iska hor nimid, habeen adag ayaanay noo ahayd, sidaa darteed, in aanu helnay fursad aanu mar kale kula ciyaarnay, way fiican tahay.
“Waan ogahay in ay tahay wareeg ka duwan, mana garanayno halka aanu ku ciyaari doono, laakiin waxaas oo dhami waa caadi. Haddii ay ka dhici doonto Budapest, way fiican tahay, waxa kale oo aanu rajaynaynaa in aanu Anfiedl ku ciyaarno taas oo aad noogu wanaagsan.”
Mar la weydiiyey haddii uu ku faraxsan yahay in uu ka badbaaday kooxaha Premier League, waxa uu yidhi: “Aad iyo aad ayaanu ugu faraxsanahay.”